Yehowa Adansefo—Som Mufo
Yɛyɛ nnipa a yɛwɔ aman ahorow so, nanso yɛnka ɔsom kuo foforo biara ho. Ɛwom, Yehowa Adansefo adwumayɛbea no ti wɔ United States deɛ, nanso yɛn mu dodow no ara wɔ aman afoforo so. Adansefo bɛyɛ ɔpepem nwɔtwe a wɔwɔ aman bɛboro 230 so no ne nkurɔfo sua Bible no. Yɛyɛ saa de di Yesu asɛm a ɔkae yi so sɛ: “Wɔbɛka ahennie ho asɛmpa yi wɔ asase so nyinaa de adi amanaman nyinaa adanseɛ.”—Mateo 24:14.
Ɛmfa ho baabi a yɛte biara no, yɛbɔ mmɔden di ɛhɔ mmara so. Nanso yɛyɛ nea yɛbɛtumi biara sɛ yɛremfa yɛn ho nhyehyɛ amanyɔsɛm mu, efisɛ yɛdi akwankyerɛ a Yesu de maa Kristofo yi so. Ɔkaa sɛ, “Wɔnyɛ wiase no fã.” Enti yɛmfa yɛn ho nhyɛ amanyɔsɛm ne akodi mu. (Yohane 15:19; 17:16) Asɛm no ne sɛ, bere a na Wiase Ko II gyina mu no, Yehowa Adansefo amfa wɔn ho annye mu ma enti wɔde wɔn mu bi guu afiase, wɔyɛɛ ebinom ayayade, na wɔkum ebi nso. Germany sɔfo panin bi kae sɛ: “Wɔn nko ara ne nnipakuo a yɛbɛtumi aka paa sɛ wɔn ahonim nti, wɔannyina Hitler aban no akyi.”
“[Yehowa Adansefo] bɔ bra pa. Wɔyɛ nkurɔfo a wɔdwene afoforo ho a yɛbɛtumi ama wɔn dibea akɛseakɛse wɔ amanyɔsɛm mu, nanso yɛkɔ soro ba fam koraa a ɛnyɛ yie da. . . . Wɔbu aban tumidi, nanso wɔgye di sɛ Onyankopɔn Ahenni nkutoo na ɛbɛtumi adi nnipa haw nyinaa ho dwuma.”—Czech Republic atesɛm krataa, Nová Svoboda.
Nanso yɛnyɛ mate-me-ho kuo. Bere a Yesu rebɔ mpae ama n’akyidifo no, ɔka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ: “Mensrɛ sɛ yi wɔn firi wiase.” (Yohane 17:15) Enti wobɛtumi ahu yɛn baabiara; adwumam, bere a yɛrekɔ dwa so anaa sukuu.
AMAN A ADANSEFO WƆ SO PAA
Sɛ wohwɛ Special Convention in Israel wɔ www.jw.org a, wobɛhu sɛ Israelfo ne Palestinafo a wɔyɛ Adansefo abom te faako; wontwiwontwi biara nni wɔn ntam. (Kɔ ABOUT US > CONVENTIONS afã hɔ)